Chikunguru 06, 2020
Vanhu vakawanda munyika havasi kuwirirana panyaya yekuti nhabvu yotanga riini munyika uye sei apo Vanotungamira nhabvu muZimbabwe VeZifa varikusangana neChina kuti vazeye kuti nhabvu yotambwa here, gore rino, kana kuti kwete nekuda kwekurura kwechirwere checoronavirus.
Mubvunzo mukuru uri kuda kupindurwa neZIFA ndewekuti nhabvu iyi yotambwa pasina vatsigiri here sezviri kuitwa kuSpain, Britain nedzimwe nyika. Vamwe vanoti nekukwira kuri kuita huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavius, zviri nani kuti nhabvu munyika imbomira kutambwa sezviri kuitika kune dzimwe nyika dzakavakidzana neZimbabwe.
Zimbabwe yagarawo iri kunetseka kuwana zvikwanisiro zvekuti ivheneke vanhu kana kuti matest kits zvekuti kuda kudzoka munhabvu kupinza vatambi munjodzi huru sezvo zvichinetsa kutamba nhabvu pasina kubatana kana kuenda pedyo nepedyo.
Mukuru wekumahofisi ePSL VaKennedy Ndebele vanoti hazviite kuti mitambo yenhabvu izotambwa musina vatsigiri sezviri kuitika mhiri kwemakungwa sezvo izvi zvisina mari ino mudamo.
VaNdebele vanoti zvikwata zvemuno zvinoraramiswa nemari yepagedhe inobhadharwa nevatsigiri kwete mari dzekushambadzira kubva kumabhizimisi makuru sezvinotika kunze kwenyika.
Mumwe muteveri wenhabvu VaTatenda Muchena vatsinhirawo mashoko aya vachiti hazvibatsire kuti Caps United, Dynamos, Highlanders neFC Platinum dzitambe munhandare musina vatsigiri.
Asi muteveri weDynamos VaOliver Musongoro vanofunga kuti nhandare dzemuno dzakakura kudarika vatsigiri venhabvu vanouya kuzoona mitambo zvekuti nhabvu inokwanisa kutambwa panguva ino.
Bhodhi reZIFA rave kutarisirwa kusangana nemusi weChina kuzeya kurudziro dzakabva kumakomiti maviri akaita musangano mukupera kwesvondo.
Makomiti aya anoti yavana mazvikokota vezvehutano muPSL, vePSL Sports Medicine Committee, nevanoronga zvemitambo muZifa, veZifa Competitions Committee, avo vakabuda nezvisungo zvinofanira kutevedzwa kuti nhabvu idzoke.
Mutauriri weZifa VaXolisani Gwesela vanoti vakuru veZifa ava varikutarisa zvakabuda mumusangano uyu, voona kuti zvinokodzera here kuti nhabvu yotambwa here zvekare kutanga munaNyamavhuvhu, semarongero avanga vaita.